I-China Ibhokisi Lokupakisha Lekhwalithi Eliphambili lewayini elibomvu eligcwele abakhiqizi be-Blue EVA nabaphakeli | URaymin
Ibhokisi Lokufaka Lephepha Elibizayo lewayini elibomvu eligcwele ukufakwa kweBlue EVA
Imboni Yokusebenza: Iwayini
Izinto: Iphepha elihlanganisiwe le-157gsm + 1500gsm greyboard
Isici: Luhlala Isikhathi Eside, Ikhwalithi Ephezulu
Usayizi: 30 x 15 x 6cm
Umbala: Spot umbala Phrinta
I-Surface Qeda: I-Spot UV, i-Matte noma i-Glossy Lamination, i-Foil Stamping, i-Embossing, i-Debossing, i-Gold noma i-Silver stamping eshisayo
Isevisi ye-OEM: Yebo
Isikhathi Sample: izinsuku 2-5
Imali yesampula: 50 $, ingabuyiselwa emuva kokuqinisekiswa kwe-bulk
Ukulethwa Kwesampula: UPS, Fedex, DHL
Isikhathi sokulethwa kwe-oda: izinsuku eziyi-15-18, kuya ngobungako
Imigomo Yokukhokha: T / T, L / C (nge-oda elikhulu), i-Western Union, i-Paypal
Kubalulekile ukukhetha isitayela sebhokisi esikhangayo futhi esisebenzayo. Kunezitayela zebhokisi ezahlukahlukene ezinikezwa eRaymin Display.
Ukuvalwa Kwamagnetic: Amabhokisi okuvalwa kazibuthe enziwa engxenyeni eyodwa. Lawa mabhokisi enziwa kusetshenziswa ibhodi yegrey esezingeni eliphakeme. Lawa mabhokisi avame ukwenziwa ngesigaxa nakumaxande futhi angabamba izinto eziningi.
I-Lift-off Lid: Leli bhokisi lenziwe nge-chipboard. Amabhokisi esembozo sokukhuphula enziwe ngezicucu ezimbili ezihlukene ezishelelezelana. Yize isitayela se-lift-off lidlile kakhulu kepha okwenza sihluke ukuthi singabamba izinto eziningi futhi singenziwa ngezifiso ezahlukene nosayizi.
Isitayela Sebhuku: ibhokisi lesitayela sencwadi lenziwe ngokuma kwencwadi. Lesi sitayela sigcina into ivikelekile ekuphumeni. Isitayela sebhokisi lezincwadi sisetshenziswa kakhulu njengebhokisi lokubonisa njengoba libonisa umkhiqizo ngesitayela se-chic.
Ibhokisi Eliwayo: Amabhokisi aqinile aqinile enziwe ngebhodi empunga. Lokhu kuvame ukuba nokuvalwa kukazibuthe noma kweribhoni. Isitayela, ukwakheka, okungabizi kakhulu, kanye nokugcina izimfanelo zamandla yilokho okwenza kube okulungele izipho.
Ibhokisi le-Flip Lid: Amabhokisi ezembozo ze-flip ajwayelekile kakhulu kepha imichilo, amabhakede nozibuthe abanamathele kuleli bhokisi elingunxande yikhona okunikeza ukubukeka kwesitayela.
Ibhokisi Lesitayela Se-Slide: Lesi sitayela senziwe nge-chipboard. Amabhokisi wesitayela se-slide afana namadrowa. Ziphelele kwimikhiqizo entekenteke futhi engaphuka kalula. Inkabi yesitayela se-slide inikeza umkhiqizo inani elifanele lomthamo kanye nokuvikelwa okuqinile kunoma yiluphi uhlobo lomonakalo.
Ibhokisi Lentamo Yamahlombe: Amabhokisi aqinile entamo yehlombe athandwa ngenxa yokusebenza kwawo okuphezulu. Ibhokisi lenziwe ngezicucu ezimbili elinye ibhokisi kanti elinye liyisivalo. Isivalo sakhiwe ngendlela yokuthi sijule ngaphezu kwebhokisi uqobo. Leli bhokisi lihlinzeka ngokuvikelwa okuphezulu kumkhiqizo.
Ibhokisi Eliyisiyingi: Amabhokisi ayindilinga anika umkhiqizo wakho ukuthinta okunethezeka okwengeziwe. Lawa mabhokisi ayizicucu ezimbili elinye ibhokisi eliyindilinga eliyilindilili kanti, elinye liyisivalo.
Ikhava Eyingxenye: Ibhokisi lekhava elincanyana liyafana nesitayela sebhokisi esivaliwe, kepha, inhloso enkulu leli bhokisi eliyisebenzisayo ukukhombisa umkhiqizo wakho emakethe. Amabhokisi ekhava ayingxenye anefasitela elibonakalayo esivalweni sawo esenza umkhiqizo ubonakale kumakhasimende. Ungakhetha ibhokisi elifanela okuhle kakhulu komkhiqizo wakho kusuka ebangeni lethu noma uzakhele ukuma ngokwakho nethimba lethu lochwepheshe. Ngosizo lwabaqambi bethu bezithombe abanethalente nobuciko kanye nobuchwepheshe bethu obuthuthukile singakwazi ukukhiqiza amabhokisi aqinile abekiwe abunjiwe ngazo zonke izindlela, ukwakheka nesitayela. IRaymin Display inikeza ubukhulu obungu-10-28pt bamabhokisi.
Langaphambilini Ibhokisi lephepha eliqinile lekhwalithi ephezulu
Olandelayo: Ibhokisi lesipho lesitayela sokuvala iribhoni lesambatho sezinwele esigcwele indwangu kasilika
Luhlala Isikhathi Isikhathi Acashile indlu ukuma POP isibonisi Tar ...
Isibonisi Sokugoqa Isikhungo Sokulahla Isikhangiso sePhathi ...
Iribhoni yokuvala isitayela sesipho sesipho sebhokisi lezinwele ...
Ibhokisi lokugoqa elihle eligcwele ukugoqa ...
Amashalofu amane Ekhombisa phansi Izikhuni, kulula ...
I-Smart 3 tier PDQ ibhokisi lokupakisha lamaketanga okhiye, ...